So Wɔwoo Yesu December Mu? - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Anadwo a wɔwoo Yesu no, na nguanhwɛfo wɔ wuram rehwɛ wɔn nguan
Nanso, Bible bɔ amanneɛ sɛ, anadwo a wɔwoo Yesu no, na nguanhwɛfo wɔ wuram rehwɛ wɔn nguan. Nokwarem no, Bible kyerɛwfo Luka kyerɛ sɛ saa bere no, na nguanhwɛfo “da wuram rewɛn wɔn nguankuw anadwo” wɔ beae bi a ɛbɛn Betlehem. (Luka 2:8-12, Twi Bible, Akuapem) Hyɛ no nsow sɛ na nguanhwɛfo no da wuram ankasa, ɛnyɛ sɛ na wɔafi adi retu mpase awia bi kɛkɛ. Ná wɔde wɔn nguan no kɔ adidi wɔ wuram anadwo no. So sɛnea na awɔw wom na osu tɔ wɔ Betlehem December mu no ne asɛm a ɛne sɛ na wɔda wuram anadwo no hyia? Dabi, ɛne no nhyia. Enti nsɛm a ɛkɔɔ so bere a wɔwoo Yesu no kyerɛ sɛ wɔanwo no December mu.*
* Sɛ wopɛ ɛho nsɛm pii a, hwɛ Reasoning From the Scriptures, a Yehowa Adansefo atintim no kratafa 176-9.